RedNotebook: Tutorial momba ny fampiasana. | Avy amin'ny Linux
RedNotebook: Tutorial momba ny fampiasana.
Pavloco | | fampiharana, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Araka ny efa nampanantenaina, ity ny tutorial momba ny fampiasana an'ity journal open source sy fitaovana bilaogy ho an'ny Linux ity.
3 Andalana vaovao sy andalana
5 Bold, italic, tsipika ary strikethrough
6 Mamorona lisitra
8 Ampidiro ny rohy sy ny sary.
Hanombohana dia tsy maintsy hazava tsara fa misy karazana fomba fijery roa ao amin'ny RedNotebook:
Mode "Edit": Amin'ity fomba ity dia noforonina ny fidirana. Nosoratana tamin'ny lahatsoratra tsotra izy ireo, izany hoe ny ankamaroan'ny zavatra soratanao eto dia tsy hanana karazana endrika. (Jereo ny sary etsy ambany)
Mode "Preview": Tiako ny miantso azy hoe "Mode mamaky" satria eto no ahazoantsika miditra ny zavatra nosoratanay, fa efa ao anaty endrika ampiasainay amin'ny alàlan'ny tandindona ampiasaina amin'ny Edit Mode. (Jereo ny sary lehibe)
Afaka mifangaro eo anelanelan'ny zoro Edit sy Preview amin'ny alàlan'ny bokotra menio, na amin'ny alàlan'ny baiko Ctrl + P
Ity ny zavatra mahaliana ary afaka mampatahotra ny mpampiasa sasany izy noho ny "fahasarotany", saingy manoro hevitra anao aho mba tsy hilavo lefona, mora izany rehefa zatra izany.
Raha hanaraka ny tutorial dia afaka mahita ireo sary roa ohatra ianao, izay mifanitsy, ny voalohany dia ny vokatra farany, ny faharoa dia ny lahatsoratra amin'ny maody famoahana.
Raha te hanome ny endrika dia ampidiro ny maody fanovana. Rehefa mamorona lahatsoratra ianao dia ho tsikaritrao (indrindra raha lava) fa rehefa mandeha amin'ny maody efijery ianao dia miseho ho tsy ampy endrika mihitsy ilay lahatsoratra, tsy misy tsipika na fehintsoratra. Ka rehefa mamorona fidirana amin'ny diary ianao dia tadidio ao an-tsaina ireto torohevitra manaraka ireto.
Andalana vaovao sy andalana
Araka ny ho tsapanao, fanaovana a tapaka tsipika ao amin'ny lahatsoratranao amin'ny Mode Editor, tsy hita taratra amin'ny valiny amin'ny Mode Preview. Mba hahatratrarana izany amin'ny faran'ny andalana tsirairay dia mila manampy "\_\_" ianao ary manohy amin'ny tsipika manaraka avy hatrany.
Hamorona a fehintsoratra vaovao, ilaina ny mamela tsipika banga.
Manampy a tsipika mampisaraka asio famantarana mitovy roapolo mifanesy (====================)
Para asio lohateny manana safidy roa ianao. Ny iray dia ny mankany amin'ny menio Insert / Title. Ny safidy hafa dia ny fanaovana azy amin'ny tanana, amin'ny alàlan'ny fampidirana ny marika mitovy (=) eo am-piandohana sy amin'ny faran'ny tsipika izay tadiavinao ho lohateny.
Ny tena tombony anaovana azy amin'ny tanana dia ny ahafahanao manome ny haavon'ny lohateny, izany hoe mamorona lohateny, dikanteny, dikanteny, sns. Satria raha manampy famantarana roa mitovy (==) ianao dia mamorona dikanteny, miaraka amina famantarana telo (===) Sub-subtitle ary toy izany hatrany (araka ny nolazain'i El Chavo del 8).
Bold, italic, tsipika ary strikethrough
Mba hahatratrarana izany indray, azonao atao ny misafidy sary na amin'ny alàlan'ny marika.
Mametraka ny lahatsoratra ao sahy karazanaOhatra, mampiasa asterisk roa (**) alohan'ny sy aorian'ny ny teny na ny tsipika tianao asongadinao. Toy izany koa ny manendry nampiana mampiasa diagonal roa (//), ho Mitsipika underscore indroa (__) ary ho an'ny miampita tsipika roa (-).
Mba hamoronana lisitra dia azonao atao indray ny safidy sary ao anaty menio Ampidiro / Lisitra bala. Amin'ity tranga ity, ny tombony amin'ny maody amin'ny tanana dia ny ahafantaranao raha mampiasa teboka bala na laharana ny lisitrao.
La bala dia tendrena amin'ny fametrahana tsipika (-) alohan'ny tsipika, raha ny numeration voatendry miaraka amin'ny mari-pamantarana miampy (+).
Mba hamoronana ambaratonga ao anaty lisitra (miaraka amin'ny bala fotsiny), avelao ny toerana roa alohan'ny hyphen hamoronana singa ambaratonga faharoa, toerana efatra ho an'ny singa ambaratonga fahatelo, sns.
Ny mari-pamantarana dia voatendry miaraka amin'ny famantarana ny pound (#). Tamin'ny lahatsoratra farany, nisy ny zavatra naneho hevitra momba ny olana ateraky ny zava-misy fa naoty iray monja isan'andro no azo noforonina. Izaho manokana dia niatrika an'io toe-javatra io tamin'ny fampiasana marika. Ohatra, raha misy lohahevitra na naoty mifandraika amin'ny asako dia mampiasa ny diezy #Dispatch aho. Noho izany dia mila mampiasa ny bara fitadiavana aho hahitako ny marika Dispatch ary raha lohahevitra manokana ny naoty dia ampiasaiko ihany koa ny marika an'io lohahevitra io. Manampy an'io fa voasoratra isan'andro ny naoty, saika "vita tsara izany.
Ampidiro ny rohy sy ny sary.
RedNotebook dia mamela anao hanisy sary amin'ny hafatrao, na rohy mankany amin'ireo rakitra eo an-toerana na pejy internet. Raha hampiasa ireo fiasa ireo dia manoro hevitra tanteraka ny maodely sary an'ny Ampidiro ny menio. Tsotra be izy io ary mahatahotra ny valiny.
Mifarana eto ny lesona fampianarako momba ny fampiasana RedNotebook. Misy safidy hafa mandroso hafa izay mety horesahiko amin'ny fotoana hafa.
Enga anie ianao hanohy hanana faran'ny herinandro tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » RedNotebook: Tutorial momba ny fampiasana.
Nahita pasty tamin'ity karazana endrika ity aho.
Mahita fahasarotana be aho amin'ny rakitsoratra na diary.
Tsy azoko ilay fotokevitra.
Inona no tombony ananany raha oharina amin'ny mpamaky teny Libiana toy ny AbiWord?
Amin'ny ankapobeny, manana kalandrie sy motera fikarohana izy miaraka amin'ireo kalitao hafa. Manoro hevitra ny tapany voalohany amin'ny lahatsoratra aho.
Miala tsiny aho raha nanelingelina ilay hevitra ianao, tsy fantatro mihitsy ilay programa.
Fiarahabana sy fisaorana noho ny vaovao.
Tena tsara, tendrony hafa, raha amin'ny andalana voalohany dia avelantsika hivezivezy amin'ny takelaka izy io dia manome vokatra tsara ho an'ny fehintsoratra izay azo ampiasaina hananganana lisitra na zavatra toa izany.
Mampatsiahy ahy ny LaTeX
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=XNUMX '' Mampiasà be ny dash ganda satria manova azy ho azy ny Libreoffice ho lavitr'ezaka lava ary tsy te hivoaka teny aho. Etsy ankilany, izaho dia tsy manisy tsipika na mampiasa sahisahy ary saika tsy italiana mihitsy. Misy fomba ve hanesorana ireo safidy ampiharina ho azy ireo?
Ahoana ny fomba hamoronana "teboka famerenana" amin'i Clonezilla